Balearic ကျွန်းများ v2 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 1.30 GB ကို
downloads ရယူရန္ 75 422
မှုအတွက်စပိန်နိုင်ငံအတွက် Balearic ကျွန်းများ၏အံ့သြဖွယ်တို့နှင့်ကြီးသောဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်ရှုခင်း FSX နှင့် P3D။ ဆုံးဖြတ်ချက် 1m / pixel (အလွန်မြင့်မား) ဖြစ်ပါသည်။ ဂြိုဟ်တုဒေတာ CNIG IGN-စပိန်ထံမှရရှိသောကွက်လောဒမွို့ 15 (မြင့်) နဲ့ပါဝင်သည်။ မြေတပြင်လုံးကိုတစ်ဦးအလွန်လက်တွေ့ပုံရိပ်တွေပေးသည်! အဘယ်သူမျှမ autogen ။
အဆိုပါအခင်းဖြစ်ပွားရာ 1,400 klm ကျော်တိုးချဲ့နှင့်ကျွန်းတို့ပါဝင်သည် Menorca (Lemhi), Mallorca (LEPA)၏, ကျွန်းများ Ibiza နှင့် Formentera (BODY).
Aerosoft မှ MallorcaX နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်:
သတိပြုရန်အလွန်ကြီးမားဖိုင် 1,29 Go ကိုထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).